Ngokuvamile abantu kubuzwa lo mbuzo olandelayo wamazinyo wakho kungani namazinyo iphupho skriplyu? Ngaphezu kwe-aspect ngokwengqondo yale nkinga, ngenxa lapho umlingani yesiguli enjalo ihlangabezana ukungakhululeki kusukela lezi imisindo, kukhona izici zempilo - lo mkhuba akukhona ingozi njengamabhu kubonakala efika kuqala.
Odokotela bamazinyo bathi ngokuvamile kakhulu umuntu ngephupho kakhulu ukugaya amazinyo akhe, abazange bakuqaphele iminyaka. Ngenxa yalokho we ngalo ingaphakathi ngomlomo is likhubazeke. Ngaphezu kwalokho, kukhona kungenzeka Ukusula namazinyo - koqweqwe lwawo Umfutho iba izacile, gingiva kukhona elikhanyayo, izikhala ukuvela. Futhi creaking kungabangela ukubola kwamazinyo. Futhi uma amazinyo yokufakelwa - creaking amazinyo, futhi kubuhlungu. Izimila kanye lokufakelwa kwezitho ayafa nge ngisho ngokushesha.
Lokhu zokugula is nokugedla kwamazinyo, imithi libizwa bruxism. Kuyinto evamile ngempela. Lokho kuba khona neqiniso lokuthi cishe zonke ingane eneminyaka engaphansi kwengu-7 iminyaka ngezinga elithile ke echayeke. Futhi uma kid ngeke bambuze umbuzo abahlale "kungani ngamazinyo iphupho skriplyu", kufanele umtshele ukuthi kulungile kuze akhulise ayisisekelo. Kodwa nansi indlela ukunquma ukuthi unenkinga bruxism ngokwabo?
Akulula ukuqaphela uma lungenayo ukutshela abanye abantu - ngoba amazinyo creaking libhekisela ukusabela equlekile umzimba. Kodwa uma ushintsha bite, namazinyo sikhubazekile noma imiqhele phezu mucosa ngomlomo ngokuvamile babonakala izilonda, zikhale alamu. Ezinye izimpawu zingase ngokuchofoza ezindlebeni, ikhanda nentamo ubuhlungu. Ngemva ukuya kudokotela, lingayithumela ukuba ukuhlola okungeziwe - electromyography. Le ndlela kuyosisiza ukuba silungise umsebenzi imisipha umlomo.
Noma kunjalo, wonke umuntu ngale nkinga ubuza umbuzo: "Kungani ngamazinyo iphupho skriplyu?" Isizathu esiyinhloko - ngokwengqondo. Ngokuvamile creak kusikisela ukuthi abantu, ngisho iphupho ngeke sisaphumula. Yingakho nje izimpawu eziqinisekile ka bruxism umuzwa ukukhathala ekuseni. Ngakho umzimba aphendvule yokukhathala kwengqondo, ukucindezeleka. Futhi, ngesizathu zingandiswa umsebenzi palsy. Strange kodwa kuyiqiniso: umuntu iphupho ukugaya amazinyo akhe ngezinye izikhathi kuphela ngenxa yokuthi uyabathanda ukuhlafuna ichopho ipensela.
Kodwa wonke umuntu uyazi imbangela bruxism - worm - ngokuphelele cha uhambisane, ngokusho kodokotela besimanje. Okungenani, ukuhlonza ubuhlobo phakathi kulezi zinkanyezi ezimbili bahluleka isayensi.
Kungani namazinyo iphupho skriplyu? Ukuze uqonde ukuthi kungani, odinga ukukwazi umlando yabo lesi sifo - emva ukugaya kungenzeka kubangelwa anomalies azalwa naso isakhiwo emhlathini. Futhi kunomthelela yokuntuleka bruxism amazinyo noma isivuno sisiningi kakhulu khona. Futhi ngokusho idatha yakamuva, babonakala bethambekele kakhulu ke kubantu abaphethwe isifo i-Parkinson futhi Huntington.
Ngemva ekutholeni imbangela ntswininiza kuyadingeka ukuze uqale ekwelapheni lesi sifo. Ukuze wenze lokhu, kumele kuqedwe izici ingqondo ubusuku gritting emazinyweni akhe. Futhi zisiza eziphumulele entanyeni massage emahlombe kusihlwa, Botox imijovo ku imisipha ezilimele ebusweni, kanye kokulutheka njengendlela yokwelapha kwengqondo.